Kacha ọhụrụ Product Manufacturers & Suppliers - China Kacha ọhụrụ Product Factory
Cross Stitch Cotton Eriri Ijipt Cotton Agba Cotton Embroidery Eriri 981457A
Ngalaba Ngwaahịa 24 Monochrome na-acha uhie uhie na egwurugwu agba agba. Six Strand Embroidery Floss bụ nkewa, nke polyester na owu nke emere site na akacha owu mara mma. Ọ bụ okpukpu abụọ mercerized maka aghụghọ sheen, gbakwunyere na ọ na-acha agba ma na-agwụ ike. Enwere ike iji obe mee ihe iji mee mgbaaka ndị enyi, Cross Stitch, Embroidery, nka nke ụmụaka ， wingkwa akwa, ịkpa ákwà, DIY, Crochet na ihe ndị ọzọ dị mma maka ụmụaka, ndị enyi, ndị nne, nne nne, ...
8 Mita 6 Strands Polyester Cotton Embroidery Eriri Polyester Cotton Cross Stitch Thread6310007
Ngalaba Ngwaahịa 100 pcs / 50pcs setịpụrụ agba agba agba agba agba eriri eriri eriri eriri eriri ejiri eriri ejiri mee maka ihe egwuregwu ụmụaka. Six Strand Embroidery Floss bụ nkewa, nke polyester na owu nke emere site na akacha owu mara mma. Ọ bụ okpukpu abụọ mercerized maka aghụghọ sheen, gbakwunyere na ọ na-acha agba ma na-agwụ ike. Enwere ike iji obe mee akwa mgbaaka maka ịme mgbaaka ọbụbụenyi, Cross Stitch, Embroidery, ọrụ aka ụmụaka, wingkwa akwa, ịkpa ákwà, DIY, Crochet ...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Na-acha uhie uhie
Ihe ejiri mara agba 80 agba agba eriri eri na onye nhazi nchekwa igbe ihe eji achọ mma. Ejiji dị mma nke na-acha odo odo, stereoscopic, ike dị elu, na-eyi nguzogide, adala mbà, emela ka ọ daa ngwa ngwa. Ọdịdị dị elu ma na-adịgide adịgide ， ejiri ejiji dị nro mee ka ọ bụrụ nke dị nro, nke dị nro na nke silky. Ọ dị mfe iji, Osisi ọ bụla dị 8m n'ogologo na akwara ọkpụkpụ ọ bụla na-abịa na eriri isii. The cross stitch floss nwere ike iji mee enyi mgbaaka ...
100 Agba Mee N'onwe Gị Agba Cotton Eriri Embroidery Eriri Cross Stitch Wiring Akwụkwọ ntuziaka DIY Agba Cotton Eriri6310006
100 agba agba Mee N'onwe Gị acha na-acha uhie uhie na eriri na-eme ka eriri eriri eriri. Ejiji dị mma nke na-acha odo odo, stereoscopic, ike dị elu, na-eyi nguzogide, adala mbà, emela ka ọ daa ngwa ngwa. Ọdịdị dị elu ma na-adịgide adịgide ， ejiri ejiji dị nro mee ka ọ bụrụ nke dị nro, nke dị nro na nke silky. Ọ dị mfe iji, Osisi ọ bụla dị 8m n'ogologo na akwara ọkpụkpụ ọ bụla na-abịa na eriri isii. Enwere ike iji akara uhie mee ihe mgbaaka ọbụbụenyi, Cross Stitch, Embroidery, ọrụ aka ụmụaka, wingkwa Akwa, Wekpa ákwà, DIY, Crochet na na. Kwesịrị ekwesị maka ụmụaka, ndị enyi, ndị nne, nne nne, ndị ọrụ ibe, ndị agbata obi ma ọ bụ ndị na-emepe ụzọ ma ọ bụ ndị nwere mmasị.
50 / 100skeins nke eriri Multicolored Maka Embroidery Cross agịga Knitting Mgbaaka agba agba Eriri Cross Stitch Cotton wingkwa Akwa 6310001
50/100 agba N'ogbe Eco-Enyi na Enyi ejiri yi owu
kpara floss embroidery eri obe stitch ikwa akwa.
Ejiji dị mma nke na-acha uhie uhie na-enwu gbaa, stereoscopic, ike dị elu,
yi eguzogide, adịghị ịjụ oyi, adịghị frizzy mfe agbajikwa. Akwa na inogide ，
Ihe eji eme akwa ejiri mee polyester dị nro, larịị na silky. Mfe iji,
Osisi nke ọ bụla na-adị 8m ogologo ma ọkpụkpụ ọ bụla nke eriri na-acha uhie uhie na-abịa na eriri isii.
Enwere ike iji obe mee akwa ọla.
Ihe mkpuchi, ọrụ aka ụmụaka, wingkwa akwa, ịkpa ákwà, DIY, Crochet na na. Adabara
ụmụ, ndị enyi, nne, nne nne, ndị ọrụ ibe, ndị agbata obi ma ọ bụ cross stitch beginners ma ọ bụ mfọn.